CHP Gürer, Nigde Ankara အဝေးပြေးလမ်းစီမံကိန်း၊ ၀ န်ကြီးကတုန့်ပြန် RayHaber
Homeတူရကီဗဟို Anatolia ဒေသကြီး06 တူရကီCHP ဂုရ, Nigde တူရကီကားလမ်းစီမံကိန်းဝန်ကြီးများ Verdi ဖြေတောင်းဆို
28 / 08 / 2019 Levent Elmastaş 06 တူရကီ, 51 Nigde, ဗဟို Anatolia ဒေသကြီး, အထွေထွေ, လမ်းမကြီး, ဘီးစနစ်များ, ခေါင်းစီးသတင်း, တူရကီ 0
chpli အစားကောင်းကြိုက်သူများအတွက် niger တုံ့ပြန်မှုတူရကီအတွက်ဝန်ကြီးများကားလမ်းစီမံကိန်းကိုဟုမေးအပ်ပေးတော်မူ၏
စီမံကိန်းနှင့်စပ်လျဉ်းတိကျမ်းစာ၌လာသည်ပါလီမန်မေးခွန်းများတုံ့ပြန်မှုအတွက်မေးခွန်းတစ်ခုGürer-တူရကီကားလမ်းခဲ့သည့် CHP Nigde လက်ထောက်ဖြစ်သူ Omar Fathi Nigde, ပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အဦဝန်ကြီး Cahit Turhan ထံမှလာ၏။
အဆိုပါ 2018 ပြည်နယ်နယ်နိမိတ်များတွင် Nigde အတွက် CHP Nigde လက်ထောက်ဖြစ်သူ Omar Fathi Gürer, တောင်းဆိုမှုကိုတုံ့ပြန်, "Nigde တူရကီနေရသူများအဝေးပြေးလမ်းမကြီးအလုပ်စပ်နှင့်အနုပညာအဆောက်အဦများအဘို့ဖန်ဆင်းတော်မူ၏တစ်စီစဉ်ထားအလုပ်ရှိပါသလား? ရှိလျှင်ဘယ်ကကဏ္ဍများကိုပြုခံရဖို့စီစဉ်ထားပါသလဲ? ဤအစီအစဉ်အဘို့ဘယ်လောက်စရိတ် reserved သလဲ? ဘယ်လောက်ကဒီအကြိုးအတှကျသုံးထားသလဲ? ယခုနှစ်အဘို့ခွဲတမ်းများ၏ကနဦးအပိုင်းများတွင် 2019 Nigde Nigde-တူရကီအဝေးပြေးလမ်းမကြီးဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှိသလော မဆိုမိလျှင်, အကျိုးအတွက်ကဘာလဲ? ဘယ်ကစီစဉ်ထားမှုကိုဆောင်ရွက်ရာဘို့သိုထားခြင်းဖြစ်သည်။ သောဤဘတ်ဂျက်အတွက်ခွဲဝေသင့်လျော်သော related န်ဆောင်မှုများအဘယ်ရာခိုင်နှုန်းဖျော်ဖြေဖို့ရည်ရွယ်သလဲ? Nigde-တူရကီအဝေးပြေးလမ်းမကြီးစီမံကိန်း Golbasi အစိတ်အပိုင်းအတွက် မှလွဲ. အခြားဌာနများအတွက်တစ်နှစ် 2019 များအတွက်အလုပ်လှုပ်ရှားမှုများစတင်ခဲ့သလဲ? ဤအဌာနဆိုင်ရာများအတွက်ဘတ်ဂျက်အတွက်ခွဲဝေရန်ပုံငွေပမာဏကိုကဘာလဲ? လည်ပတ်မှုပုံစံကိုသူတို့ဤအပိုင်း၌မိမိတို့အလုပ်လှုပ်ရှားမှုများစတင်ပါခဲ့ပါနုကုမ္ပဏီလိုအပ်ပါတယ်လုပ်ရမလား? ကုမ္ပဏီများအလုပ်လှုပ်ရှားမှုများစတင်နိုင်ရန်ဖြစ်သောအဘယျစိတျအပိုငျးအပေါ်လုပ်ကိုင်ဖို့စတင်ခဲ့ပြီလော မည်သည့်အလုပ်သက်ဆိုင်ရာလျှင်, အလုပ်စတင်နိုင်ရန်အတွက်အကြောင်းပြချက်ကဘာလဲ? အလုပ်ရသောအခါကိုစတင်လိမ့်မည်နည်း "ဟုအဆိုပါပုံစံ၏မေးခွန်းကိုမှဦးဆောင်ပြီး။
မေးခွန်းများကိုပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အဦဝန်ကြီး Mehmet Cahit Turhan တုံ့ပြန်၏ CHP လက်ထောက်ဖြစ်သူ Omar Fathi Gürerကီလိုမီတာ Nigde သူမြို့ကန့်သတ်အတွင်းတည်ရှိသည်ဟုဆိုသည်နေစဉ်, တူရကီ-Nigde အဆိုပါ 330 ကီလိုမီတာရှည်လျားသောကားလမ်းစီမံကိန်း 31 ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအဝေးပြေးလမ်းမကြီးကလည်း, တူရကီGölbaşıခရိုင်မှစတင်ကာပြီးစီးသည့်အခါသတင်းအချက်အလက် "Nigde အိုင်လမ်းဆုံများတွင်ကားလမ်း link ကိုလမ်းဖွင့်အဆုံးသတ်လိမ့်မည်ဟု Turhan အဆိုပါKırsehirသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပေးပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါတူရကီ-Nigde အဝေးပြေးလမ်းမကြီးများတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်အတူ Marmara, ပင်လယ်နက်နှင့်တူရကီ-Nigde ဖြတ်တောက်မှုကားလမ်း၏ပျောက်ဆုံးနေတဲ့အကြွင်းအကျန်ပြီးစီးခဲ့ပါလိမ့်မည်သည့် Eurasian europenmotonvay (TEM) ၏အရေးအပါဆုံးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကွန်ယက်၏မြေထဲပင်လယ်ဒေသကြီးဖြတ်ကျော်တစ်ဦး၏အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုမရှိစေရန်။
Nigde တူရကီ၏နည်းလမ်းနှင့်အတူ Build-Operate-လွှဲပြောင်းမော်ဒယ် (BOT စနစ်) ချေးငွေသဘောတူညီချက် 07.06.2018 အပေါ်လက်မှတ်ရေးထိုးယခုနှစ်အဝေးပြေးလမ်းမကြီး 2018 အားလုံးကိုအစိတ်အပိုင်းများအတွက်ဆောက်လုပ်ရေးစတင်ခဲ့သည်ဘတ်ဂျက်၏ခွဲဝေသည့် BOT စနစ်ပုံစံနှင့်အတူခဲ့သည်။
ကီလိုမီတာ 38,7 2019 အတွက်ပြီးစီးပစ်မှတ်ထားလျက်ရှိသည်စဉ်အခါ, အဝေးပြေးလမ်းမကြီးများ၏ 139,3 2020 ကီလိုမီတာခုနှစ်တွင်တူရကီ-Nigde ၏သဘောတူညီချက်အရ, 152 2021 ကီလိုမီတာမှာရှိတဲ့ "ဟုသူကပြန်ဖြေသည်။
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: အဆောက်အဦးခေါင်မိုးဘူတာအမှတ်7စီမံကိန်းများကိုလေလံပြန်လည်မွမ်းမံ၏ဘူတာရုံအဆောက်အဦး၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး Nigde စည်းမျဉ်းဥပဒေ, Nigde Nigde ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်အဆောက်အအုံထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးနှင့်တိုးတက်မှုပတျဝနျးကငျြ 14 / 09 / 2012 TCDD2။ ဒေသန္တရရုံးတင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2012 / 122332 1 - အုပ်ချုပ်ရေး၏က) လိပ်စာ: Yenimahalle / တူရကီခ၏ Marsandiz ခရိုင်) ကတယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 3123090515 - 3122111571 ဂ) အီလက်ထရောနစ်မေးလ်လိပ်စာ (ရှိလျှင်):2ozlembozbay@tcdd.gov.t ဖြစ်ပါသည် - ပစ္စည်းဝယ်ယူရေး ဘာသာရပ်ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်, အမျိုးအစားနှင့်အရေအတွက်၏သဘောသဘာဝ: ပြန်လည်ထူထောင်ရေးက) ကန်ထရိုက်စာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုး5အလုပ်၏ရက်စွဲ၏တင်သည့်ရက်စွဲကနေ Nigde ခ) ရက်အတွင်းပေးပို့ခြင်းအပေါ်သို့စတငျရကြလိမ့်မည်ရာအရပ် 90 ၏ဂ) ကြာချိန် (ကိုးဆယ်) ကိုအကဲဖြတ်၏ရက်ပေါင်း 3- နူးညံ့ / ကျွမ်းကျင်မှု: တစ် ) နေရာအရပ်: တူရကီခ) ရက်စွဲနှင့်အချိန်: 24.09.2012 - 10: 004- တင်ဒါ ...
CHP Gürer: "TCDD လွတ်အိုးအိမ် 2055 ဘို့စောင့်ဆိုင်းနေခြင်းဖြစ်သည်" 12 / 09 / 2017 CHP Nigde လက်ထောက် SOE ကော်မရှင်နှင့်အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သူ Omar Fathi ဂုရပို့ဆောင်ရေး, ရေကြောင်းရေးရာနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီး Ahmet Arslan ၏မေးခွန်းကိုဖြေဆိုခြင်း, TCDD66582တထောင်ကနေတထောင်အိုးအိမ် 55 ရပ်နားခြင်းပြည်နယ်ကရှင်းပြတယ်။ ဝန်ကြီး Arslan, သူတို့ကငှားရမ်းနိုင်ဆန္ဒရှိသောသူတို့သည်အစီရင်ခံလူမှုရေးနှင့်စီးပွားရေးစိန်ခေါ်မှုများ။ CHP လက်ထောက်Gürer, ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီး Ahmet Arslan "TCDD အကြားအများအပြားလူနေအိမ်အစစ်အမှန်ပိုင်ဆိုင်မှုရှိပါတယ်လော prompt ကိုတင်သွင်းရေးသားထားသောရွေ့လျားမှုအတွက်ပါလီမန်၏နိုင်ငံတော်သမ္မတကဖြေကြားခံရဖို့ ဒါဟာအချည်းနှီးသောဘာသာရပ်နှင့်အတူရှိပါသလော အချည်းနှီးသောအဘယ်ကြောင့်ရှိပါတယ် အကယ်. ? ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရမှငှားရမ်းထားခံရဖို့ xnumx.nc လား? ဘူတာရုံများနှင့်အဆောက်အဦးများအရေအတွက်သည်လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်အတွင်းအိုးအိမ်ဖြိုဖျက်မည်မျှရှိသနည်း ...
CHP Gürer: Unplanned မြန်နှုန်းလိပ်မြန်နှုန်းရထားစီမံကိန်းအားနှင့်အတူရွေ့လျား 13 / 09 / 2017 လုံလောက်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးအလုပ်မပါဘဲစတင်တူရကီ-Sivas အမြင့်မြန်နှုန်းမီးရထားစီမံကိန်း, စီမံကိန်းအချို့အစိတ်အပိုင်းများအတွက်အပြောင်းအလဲတစ်ခုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။ အမြင့်အတွက်လမ်းကြောင်းများနှင့် 32 80 မီတာမီတာမှဖြတ်တောက်မှု 36,3 Yerköy-Sivas လိုင်းကီလိုမီတာ၏အတိမ်အနက်ကိုဖွင့်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။ kırıkkale-Yerkoy ထဲမှာအလားတူအကြောင်းပြချက်တွေများအတွက်ထောက်ပံ့ရေးလိုင်းလေလံမထွက်။ အစပျိုး Unplanned အလုပ်စီမံကိန်းများ၏အချိန်မီပြီးစီးတားဆီး။ ပါလီမန်မေးခွန်းများကိုတုံ့ပြန် CHP Nigde လက်ထောက်ဖြစ်သူ Omar Fathi Gürerပို့ဆောင်ရေး, ရေကြောင်းရေးရာနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီး Ahmet Arslan, တူရကီ-Sivas အမြင့်မြန်နှုန်းရထားစီမံကိန်းအောက်တွင်Yerköy-Sivas လိုင်းအတွက်အပြောင်းအလဲမျဉ်း 287,6 ကီလိုမီတာပရောဂျက်သွားအသုံးပြုပုံ 36,3 လျှော့ချတာရှည် 251,3 ကီလိုမီတာကီလိုမီတာကြောင်းကြေညာခဲ့သည်။ CHP Nigde ဒုတိယဝန်ကြီး ...
CHP Gürer: ဒါရိုက်တာမစ္စတာဧဒင်တူရကီရာထူးမှနုတ်ထွက်အတွက် YHT-Related မတော်တဆဖြစ်သွား? 10 / 03 / 2019 CHP Nigde လက်ထောက်ဖြစ်သူ Omar Fathi Gürer, ဒီဇင်ဘာလ၌တူရကီအတွက်ဖြစ်ပေါ် 13 နှင့်9လူတွေကပါလီမန်မေးခွန်းများကိုမှတဆင့်လွှတ်တော်သို့ရဲ့အစီအစဉ်အပေါ်အမြင့်မြန်နှုန်းရထား (YHT) မော်တော်ယာဉ်မတော်တဆမှုအဖြစ်သူတို့ဘဝဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ Gürer "ဟုအဆိုပါမတော်တဆမှုများအတွက်ခဲ့üstenipတာဝန်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများနှင့်ဝန်ကြီးများ၏နှုတ်ထွက်စာခဲ့သလဲ" ဟုပြောသည်ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီး Cahit Turhan အဖြစ်မေးခွန်းကိုဖြေဆိုခြင်း, ယေဘုယျစုံစမ်းစစ်ဆေးနေဆဲဆက်လက်ကြောင်းကြေညာခဲ့သည်။ ပါလီမန်မေးခွန်းများကိုအတွက်၏ TCDD အထွေထွေဒါရိုက်တာရီပတ်ဘလီကန်ပြည်သူ့ပါတီ (CHP), Nigde လက်ထောက်ဖြစ်သူ Omar Fathi Gürer၏စကားများပြန်ခေါ် "ကျနော်တို့ 24 နှင့်အတူမြန်နှုန်းမြင့်မီးရထားလမ်းကြောင်းစောင့်ကြည့်နေကြသည်ကင်မရာ watch, ငါတို့သည်လည်း, ထိုတာဝန်ပေးပုဂ္ဂိုလ်များစစ်ဆေးနေနေကြတယ်", "ကင်မရာအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်လမ်းအပေါ်ဘယ်လိုမတော်တဆမှုခဲ့သလဲ အထွေထွေ ...
CHP Nigde လက်ထောက်Gürerဖော်ပြချက် 21 / 06 / 2016 CHP Nigde လက်ထောက်Gürerဖော်ပြချက်: Cappadocia အမြင့်မြန်နှုန်းရထားထဲမှာ CHP Nigde လက်ထောက်ဖြစ်သူ Omar Fathi Gürer, (YHT) သူတို့ရာတွင်ပါဝင်ပတ်သက်မဟုတ်ကြဟုဆိုသည်။ Gürer CHP ပြည်နယ်ဥက္ကဋ္ဌဦးအတွက်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ Nigde, Konya နှင့် Cappadocia ဒေသမှာရှိတဲ့တစ်ရှူးပျက်စီးမှု, ဒေသတွင်း၌ဟိုတယ်လုပ်ငန်းရှင်, ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဖွဲ့အစည်းများနှင့်အချို့သော EC သည့်တန်ပြန်ပါတီအဖွဲ့ဝင်များကဘွားမြင်ကြောင်းအကြံပြုဖြစ်ပေါ်စေလိမ့်မည်ဟုကြေညာချက်၏နေ့စွဲ၏ Aksaray-Nevsehir-Kayseri YHT စီမံကိန်းကို။ Cappadocia တူရကီရဲ့လူကြိုက်အများဆုံးနှင့်အရေးကြီးသောခရီးသွားဧည့်ရေးစင်တာGürerသစ်လမ်းကြောင်းကဒေသ၏မြေအောက်ရေနှင့်မျက်နှာပြင်တန်ဖိုးများကိုထိခိုက်စေနိုင်ကြောင်းငြင်းခုံကြောင့်ဒေသတွင်း၌ရထားလမ်းဖန်တီးပါလိမ့်မည်အလေးပေးသည်။ Gürer, တည်ဆဲမီးရထားနှင့် Konya, Ulukışla, Nigde, Kayseri ကြောင်း ...
CHP Gürer: "TCDD လွတ်အိုးအိမ် 2055 ဘို့စောင့်ဆိုင်းနေခြင်းဖြစ်သည်"
CHP Gürer: Unplanned မြန်နှုန်းလိပ်မြန်နှုန်းရထားစီမံကိန်းအားနှင့်အတူရွေ့လျား
CHP Gürer: ဒါရိုက်တာမစ္စတာဧဒင်တူရကီရာထူးမှနုတ်ထွက်အတွက် YHT-Related မတော်တဆဖြစ်သွား?
CHP Nigde လက်ထောက်Gürerဖော်ပြချက်
CHP ဂုရ: "ကျွန်တော်တို့ကိုတွေ့လိမ့်မည်သည့်အခါပို့ဆောင်ရေး Nigde ၏န်ကြီးဌာန?"
MHP Konya လက်ထောက်Kalaycıသူန်ကြီး Yildirim Metro စီမံကိန်း replied ဟုမေး
Samsun CHP လက်ထောက် Thompson ကဝန်ကြီး Arslan high-speed ကိုရထားစီမံကိန်းအားမေးလျှင်,
CHP ကောင်စီဝင်အစ္စတန်ဘူလ်အတွက် Metro လေ့လာမှုကိုမေးမြန်းခဲ့
Sumer CHP Adana အဆိုပါမီးရထားစီမံကိန်းဟုမေးထားပါတယ်